Bilbilli biyya alaatii bilbilaman maaf lakkoofsa Itoophiyaatiin bahu? - BBC News Afaan Oromoo
Waggoota dheeraaf bilbilli gara biyyaatti yoo bilbilamu lakkoofsa biyyaa keessaatti akka geeddaraman kanneen taasisan to'annoo jala olfamuun isaanii tibbana oduun dhagahameera.
Yakkawwan akka dhaabbanni Telekoom galii bilbila biyyoota alaa irraa argatu akka dhabu ittiin taasifaman keessaa lakkoofsa bilbilaa gara biyyaa keessatti geeddaruun ni argama.
Namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan alaa yoo bilbilameefis bilbila harkaa isaanitiin lakkoofsi argan lakkoofsa biyya keessaa yoo ta'u kan achumaa bilbilame jedhanii yaadu.
Haa ta'u malee, bilbilichii kan bilbilamu biyyaa alaa biraatii ta'u mala. Ofii bilbila alaa bilbilamu kan biyya keessa akka fakkaatan taasisuun maalii fi eenyun raawwatama?
Obbo Takliit Yaayilaat kan BBCn dubbisees waggoota sadiin dura Itiyoo-Teelekoomiitti oggeessa bulchiinsa IT Kirawud turan.
Ammaan tana dhuunfaan hojii gorsaa hojjachaa kan jiran Obbo Takliit, haala traangulaayizeshiin jedhamuun gareewwan ykn namoonni dhuunfaa bilbila biyya alaatii bilbilaman gara kan biyyaa keessaatti geeddaran bakki itti argaman adda ni baafama ture jedhu.
Lakkoofsi biyya alaa gara lakkoofsa Itoophiyaatti attamiin geeddarama?
Toftichis Siim booksi kiraawud jedhama. Bilbilawwan biyyaa garaa garaa irraa gara Itoophiyaatti bilbilaman gara kan biyya keessatti akka geedaraman taasisuun kanneen barbaadan Itoophiyaa keessa ta'uun Siimii fi sarara intarneetii bitatu.
Karaa gara biraatiin ammoo, dhababbileen tajaajila 'intarkoneekti' jedhamu kennan Itoophiyaan alatti argamu. Bakka jiran irraa bilbilawwan gara Itoophiyaatti taasisan lakkoosfa Itoophiyaatiin akka bahan gochu danda'u.
Namoonni Itoophiyaa keessa jiranis dhaabbilee kanneen waliin waliigalteerra gahu. Isaan boodas dhaabbilee bilbilawwan biyyaa alaa (raawutiingi) gara gara teeleetti osoo hintaane gara Siimii ofiin qopheessaniitti (tessoo IP) akka eergaman taasisu.
''Bilbilawwan kunneenis gara teeleen darbuun osoo irra jiraatuu gara Siimii namoonni bitataniitti (lakkoofsa bilbilaatti) qajeelu'' jedha Takliit yoo ibsu.
Jiraattoonni bilbilli bilbilamuuf garuu maal ta'aa akka jiru waanti beekan hnjiru. Dhugaattis kanneen biyya alaatiirra bilbilanis ta'ee kanneen bilbilicha fudhatan adeemsichi maala akka ta'e hinbeekan.
Lakkofsa bilbilaa geeddaruun maaliif barbaachise?
Bilbilli biyya alaarraa gara Itoophiyaatti yoo bilblamu yoo xinnaate gara qarshii 11 ni kanfalchiisa. Bilbila biyya keessaatiif ammoo gara saantima 75 kanfalchiisa. Haala namoonni ittiin fayyadaman kanaanis bilbila biyya alaatiif gara saantiima 75 kanfalchiisuun qarshii 11 irraa kan hafe dhaabilee interkoneektii hojataniitu adda hirata.
Namoonni kan baasan baasii intarneetii qofaadha.
Gochi namoota kanneenis ija seera Itoophiyaatiin yakka yoo ta'u, biyyoonni adeemsicha seera qabeessa taasisuun itti fayyadaman baayyeedha.
Obbo Takliit akka fakkeenyaatti kan ibsan, telekoomii Saawudiiti. Telekomiin Saawudii baasii bilbila biyya alaa hir'isuuf jecha Siim booksi kiraawudii ifatti fayyadama jedha. Tooftaa kanatti fayyadamuun biyyoota hedduutti seera qabeessa waan ta'eef, biyyoonni itti bilbilamuus mootummoota seeraa gaafachuu hindanda'an.
Osoo adeemsi kunis seera qabeessa ta'ee kan fayyadamu teelee akka ture himu oggeessi kun.
Falli isaa maaliidha?
Akka Obbo Takliit jedhaniittis, qaamooleen fi gareewwan akka bilbilli biyya alaatii gara Itoophiyaatti blbilaman lakkoofsa biyya keessaatiin akka bahan taasisaniif hedduun isaanii Finfinnee, Matammaa fi Moyaaleetti argamu.
Bilbilli kunneenis baayyeen isaanii kan irraa ka'an biyyoota akka Chaayinaa, Xaaliyaaniifi Saawudii irraayi.
Namoonni gocha kana raawwatan yoo hidhamanis battalumatti namoonni ykn garee biyyaa yoo isuma raawwatu mul'atu.
''Wayitan teelee hojjachaa turetti dhaabbatichi ji'aan gara dolaara miiliyoona sadii dhabaa ture,'' jedhu.
Ogeessi kun akka jedhanitti, hojimaatichi osoo seera qabeessa taasifamee, dhaabbilee biyya alaas namoota dhuunfaa waliin osoo hintaane kallattiin teelee waliin waliigaltee taasisu ture. Bu'aan namoonni dhuunfaa karaa seeraan alaatiin argataa jiranis kan dhaabbatichaa ta'a tures jedhaniiru.